Ukusetshenziswa Kwamakhamera Worn Worn by Izimboni | Izixazululo ze-OMG
Ukusetshenziswa Kwamakhamera Worn Worn by Izimboni
Amakhamera agqokwe emzimbeni abonwe njengendlela eyodwa yokubhekana nobunzima nokwenza ngcono ukusebenza komthetho ngokuvamile. Okusha, okungabekwa ezibukweni zamehlo noma endaweni yesifuba, kunikela ngemininingwane eqhubekayo uma isetshenziswa yizikhulu ewashini noma ezabelweni ezahlukahlukene ezihlangana nabantu abavela kwinethiwekhi. I-video egqoke umzimba (i-BWV), ebizwa ngenye indlela amakhamera omzimba noma amakhamera agqokekayo umsindo ogqokekayo, ividiyo, noma uhlaka lokuqopha izithombe.
Yize ngokwesiko asetshenziswa ukuphoqelelwa komthetho nokuphatha izinhlekelele, amakhamera agqokwa ngomzimba anenombolo enkulu yokusetshenziswa futhi angazuzisa ngaphakathi a izimboni ezahlukahlukene, Ngokwesibonelo:
Insiza kagesi, igesi kanye ne-Sanitary
Ezezimali, Umshuwalense kanye Nezindlu
Kungenzeka ucabange ukuthi ubukhulu bamakhamera agqokwa ngomzimba akhawulelwe ukusetshenziswa kwamaphoyisa nonogada kepha akulona iqiniso iqiniso. Le ndatshana ihlanganisa ukuhlaziya okuningiliziwe kanye nenothi lokuthi, futhi yiziphi izimboni ezisebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba ukuze zisizakale. Kungaba yini izinzuzo nokulimazeka kwabo besebenzisa lobu buchwepheshe? Ngabe lobu buchwepheshe bungabhekwa njengobana kungumgogodla ekwandiseni inzuzo evela kulezi zimboni?
Amakhamera agqokwa ngomzimba - Ucezu olukhuphukayo lwe-Tech:
Hhayi kuphela amakhamera agqokwa ngumzimba ahlinzeka ngosizo kuma-ejensi abomthetho kepha linokunye ukusetshenziswa kwalo okungenzeka sasingakwazi. Amakhamera agqokwa ngomzimba abhekwa njengengxenye yobuchwepheshe obukhulayo obuzoba yingxenye ebalulekile cishe kuyo yonke imboni kungekudala. Sidinga ukuqonda ukubaluleka kwamakhamu agqokwa ngumzimba embonini ngayinye ukuze wamukele ngokuphelele lobu buchwepheshe obusha. Ukufaka ubuchwepheshe obusha ngaso sonke isikhathi kunzima. Cishe ingxenye yesithathu yabaholi bamabhizinisi e-UK iyavuma ukuthi izinhlangano zabo zingama-laggards uma kuziwa ekwenziweni kobuchwepheshe obusha, ngokusho kweTomTom Telematics 'Senior Managers Study, eyenziwa ngoJuni 2017 - Telegraph.
Ukuze uphile impilo ephumelelayo, ingqondo evulekele iziphakamiso nemibono emisha ihlala ikhuphuka isitebhisi. Kunjalo nangamabhizinisi nezimboni, kuyabonakala ukuthi uqaphela ukuthi amabhizinisi amukele ubuchwepheshe obusha akhule kahle esikhathini esedlule. Ngakho-ke, ngokubona kwami, yonke imboni kanye nawo wonke amabhizinisi kufanele acabangele ukwamukela ubuchwepheshe obusha kubuchwepheshe bawo. Amakhamera agqokwa ngomzimba ubuchwepheshe obukhuphukayo futhi angabonakala ewusizo ezimbonini zanamuhla nezakudala.
Amakhamera agqokwa ngomzimba nezolimo:
Amakhamera agqokwa ngomzimba angasetshenziswa kuyo yonke imikhakha yempilo ehlanganisa ukusebenzisana kwabantu. Ezolimo nazo zingenye yazo. Ezolimo zithatha umsebenzi obalulekile empilweni yezomnotho. Kuyisisekelo sohlaka lwethu lwezezimali. I-Agribusiness inika ukondliwa nezinto ezibonakalayo ezihlanzekile namathuba webhizinisi ngezinga elikhulu kakhulu labantu.
Manje, umbuzo uthi amakhamera agqokwa ngumzimba angabasiza kanjani abalimi bethu? Kuyabonakala ukuthi inani elikhulu labalimi liyagula noma lilimele ngenkathi besebenza epulazini. Lokhu kulimala kungaba ngumphumela we-allergies noma ukutheleleka kusuka izidumbu noma kungenxa yokuhlaselwa kwesilwane esithile sasendle.
Ngokombiko othile umbiko kusuka ezikhungweni zokulawulwa kwezifo nokuvimbela (i-CDC), e-2014, ilinganiselwa insizwa ye-12,000 elimele emapulazini; I-4,000 yalokhu kulimala ibangelwa umsebenzi wasepulazini. Manje, lokhu kulimala noma ngisho nokufa kwabalimi abasebancane bekungavinjelwa uma ubuchwepheshe obulungile busetshenziswa ngalezozinsuku. Ukufaka ikhamera egqoke umzimba esifubeni sabalimi bekuzobanikeza umuzwa wokuphepha, ukuthi abathandekayo babo ekhaya bayababukela. Uma kwenzeka noma yini engaqinisekile noma ngeshwa, bangafika bezophula ngesikhathi. Ngokuqinisekile kuzonciphisa ukuqina.
Ezinye izitshalo zidingeka ukuniselwa ebusuku, abalimi abazizwa bephephile ukuhamba bodwa ebusuku emapulazini, ngoba ukusongela kwesilwane sasendle esingena kuhlala kuhlala kukhulu ekhanda labo. Kepha uma bekwazi, bayaqashwa kanti noma ikuphi ukuqaphela kuzabikwa ngokushesha, ngeke banqikaze ukuhamba bodwa ebusuku.
Amakhamera agqokwa ngomzimba angasiza futhi abaqashi babalimi ukuthi babheke ukuthi basebenza kanjani futhi babheke inqubekela phambili yabo kanye nokusebenza kwezitshalo nokukhula kwazo.
Amakhamera agqokwa ngomzimba nezimayini:
Izinsimbi nezimbiwa esincike kuzo empilweni yethu ejwayelekile yansuku zonke kuyamangaza. Ngethuba lokuthi uyeke umzuzwana umzuzwana ukucubungula, bheka nxazonke ukuze ubuke izinto ozihlanganisile ezingezenziwa yizimpahla ezenzelwe isitshalo. Ukusuka kusimende ongena esikrinini ufunda manje, iqiniso lethu nendlela yethu yokuphila kuncike emiphumeleni yokusebenza kwezimayini zanamuhla.
Izimayini zihlaba futhi zilimaze inani elikhulu labantu kunanoma yimuphi omunye umsebenzi emhlabeni. Bangaphezu kuka-15,000 XNUMX abavukuzi ababulawa unyaka nonyaka - futhi lokhu kuyisibalo esisemthethweni kuphela sabantu abashonile. Kungenzeka, kungaphezu kwalokho. Kunezindlela eziningi zokugwema lezi zinhlobo zemicimbi. Ukusetshenziswa kwamakhamera agqoke umzimba kungenye yazo, kungasiza ukwengamela abantu abaphezulu phansi ukuthi bazi ukuthi kuzoba nomcimbi oyinhlekelele kungekudala.
Lezi zinkambu zomzimba ezikhethekile ezinganikeza ukusakazwa okuphezulu ezindaweni zobumnyama obedlulele ngaphansi komhlaba zingadlala indima ebalulekile ukuvikela izinhlobo ezinjalo zemicimbi. Uma kubikezelwa noma iyiphi indawo, abavukuzi bangatshela abasebenza ngemuva kwabaqaphi ukuthi bathumele iqembu labatakuli. Kuyabonakala futhi ukuthi abavukuzi nabo bafa ngenxa yokugcwala, lezi zinkambi ezikhethekile zomzimba ziza nezitholi zomusi ezizokwazisa ithimba labahlengi, ngaleyo ndlela zisindise abavukuzi ngesikhathi.
Ukufingqa, singasho ukuthi izinqolobane ezigqokwa umzimba ziyingxenye ebalulekile yezinyathelo zokuphepha zabavukuzi futhi kufanele zibe yingxenye yemishini yabo yezokumbiwa phansi. Ukuthatha lezi zinyathelo ngokuqinisekile kuzosiza ukwehlisa isibalo sezinto ezixakile uma kuqhathaniswa nenkatho ebonwe kumashumishumi eminyaka edlule.
Amakhamera agqokwa ngomzimba nokwakhiwa:
Udaba olukhulu esibhekene nalo namuhla ukuthi abantu abanelisekile ngokusebenza komakhi wabo. Bakholelwa ukuthi bachitha isikhathi esiningi bechitha kunokuba benze umsebenzi. Ukufaka amakhamera agqokwa ngomzimba esifubeni somakhi kungabanikeza iso lokuzigcina kubakhi babo. Izindawo zokwakha zingabonakala kuwo wonke amabhlokhi amabili edolobha elinabantu abaningi elibonisa amathuba amakhulu alo mkhiqizo. Usonkontileka noma umnikazi angagcina umkhondo wezinto abazenzayo nabasebenza ngazo besebenzisa le gajethi.
Ukufaka le mishini kubasebenzi kuzobenza bahlale bematasa benza umsebenzi njengoba bezokwazi ukuthi usonkontileka wabo ubabheka njalo. Bazonikela ngokusemandleni abo emsebenzini wabo, ngoba kungokwemvelo yabantu ukuthi siphuthuke sazi ukuthi kukhona umuntu osibhekile nokuthi lowo muntu ungumqashi wakho, futhi usengozini yokulahlekelwa ngumsebenzi wakho; Umphumela we-100% uzobhekwa.
Enye inzuzo enkulu amakhamera agqokwa ngumzimba angakhiqiza embonini yezokwakha ukuthi uma umsebenzi elimala ngesikhathi senqubo ethile yokwakha, anganikezwa usizo lokuqala nemithi efanelekile njengoba omunye umuntu kwelinye icala ezokwaziswa ngokushesha ngeshwa umcimbi. Ngakho-ke, singasho ukuthi amakhamera agqokwa uMzimba awanikeli nje kuphela izindlela zokuphepha kepha nemiyalo yokuphatha nayo. Ngakho-ke, kusobala ukuthi amakhamera agqokwa ngomzimba kufanele abe yingxenye yebhizinisi elisha lokwakha naleli elidala.
Amakhamera agqokwa ngomzimba nokukhiqiza:
Ibhizinisi lokukhiqiza alaziwa nakanjani. Kodwa-ke, le mboni ibaluleke kakhulu ekuthuthukiseni iminotho ekhulayo kanye nezimakethe ezidaliwe. Ngenkathi ukukhiqiza kungeyona impendulo kuzo zonke izingqinamba, kuyimboni yokuqagela neyintsha edala ukuvuleka okuningi komsebenzi. Lokhu kuvulwa kwemisebenzi kugcwele abantu futhi laba bantu bayadingeka ukuqashwa ukuze kwakheke indawo engcono yokusebenza.
Ake sithi utshala iyunithi lokukhiqiza izindwangu. Wazi kanjani ukuthi abasebenzi basebenza imisebenzi yabo ngendlela efanele, ngoba kufanele utshale amakhamera agqokwa ngomzimba ezifubeni zawo. Lokhu kuzokusiza ukwengeza isivuno sakho kanye nenzuzo.
Enye inzuzo yokusebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba endaweni yokukhiqiza iyasiza ukugcina ubudlelwane obuhle nobunempilo phakathi kwabasebenzi. Bayazi ukuthi zigadwe, ngakho-ke abalwi bodwa ezintweni ezincane okuyinto ejwayelekile kubantu abasezakhiweni zokukhiqiza (ngenxa yendlela yabo yokuphila enempilo). Kubhekwe ukuthi bambalwa abalwa kulezo zingcweti zokwakha lapho kufakwa khona izinsiza zomzimba kunalezo ezingafakwanga lapho. Ngakho-ke, singasho ukuthi amakhamera agqokwa ngomzimba aba yingxenye ebalulekile embonini yokukhiqiza. Leyo nkathi ayikude kangako lapho zonke izisebenzi zazo zonke izitho zizobe zifakwe izinsimbi zomzimba.
Amakhamera agqokwa ngomzimba nokuhamba:
Amakhamera agqokwa ngomzimba noma ezinye izinkambi bezilokhu zingumdlalo obalulekile ekuphepheni uma kukhulunywa ngenkundla yezokuhamba. Bakusiza ukuhambisa imicimbi ebukhoma eyenzeka emigwaqweni. Uma usebenzisa inkampani yezokuthutha, kufanele usebenzise lobuchwepheshe. Amakhamera agqoke umzimba esifubeni sesisebenzi sakho ukuze azi ukuthi aqhuba kanjani nokuthi siyini isimo sawo somgwaqo. Bawaphatha kanjani amakhasimende akho abalulekile okusho abagibeli?
Yiziphi izinzuzo zezingubo zomzimba ezigqokwa ngumzimba ezizokunikeza uma uzisebenzisa emkhakheni wezokuhamba? Yebo, okokuqala, uzogcina ulandelela umzila umshayeli awulandela, futhi kungenzeka nge-GPS, ngokungangabazeki, kodwa ngale ndlela, uthola okuphakelayo okubukhoma. Inzuzo yesibili engayibona ngisebenzisa lezi zinkambi ukuthi; uma kwenzeka kwenzeka isigameko esingesihle, ungathumela amaqembu okusindisa ngesikhathi ukusindisa izimpilo zawo. Kuzophinde futhi kunikeze okubhalwe phansi ongakuhlaziya ngokuhamba kwesikhathi ukuze ufinyelele kokungahambanga kahle okuholele kumcimbi osabekayo.
Amakhamera agqokwa ngomzimba afakwe esifubeni somshayeli noma womqhubi, azosiza bonke abathintekayo, abagibeli nabashayeli. Umgibeli uyazi ukuthi umuntu ngakolunye uhlangothi ubukele okuphakelayo futhi ubhekwa, okuzokwenza isimo sakhe sengqondo sibe sihle kumqhubi noma kumshayeli webhasi. Okwesibili, abagibeli bazozizwa belondekile bazi ukuthi laba bashayeli abakwazi ukwenza kabi njengoba beqashwa ngabaqashi babo. Lokhu ekugcineni kuzoholela ebudlelwaneni obukhiqizayo obungcono phakathi kwabagibeli nabanye abasebenzi bokuhamba.
Amakhamera agqokwa ngomzimba nokuxhumana:
Amakhamera agqokwa ngomzimba awanqunyelwe kwinamba ethile ayinikezwe yezinkambu, futhi angukhiye obalulekile wokuqhuba ibhizinisi lezinkonzo zokuxhumana. Uma uqhuba uhlobo olunjalo lwebhizinisi, kuzoba nabasebenzi abasekela amakhasimende futhi abantu bazobe beza nsuku zonke bezothenga imikhiqizo yakho. Kungcono ukuthi kufakwe ikhamera egqoke umzimba esifubeni somuntu osekelayo owabeke lapho. Insizakalo yekhwalithi eqinisekisiwe yaleyo ejenti inganakekelwa kuleli cala. Ukwazi ukuthi umqashi wami uqapha ukusebenzisana kwami ​​nokuziphatha kwami ​​namakhasimende, ngokuqinisekile uzonikeza amaphesenti akhe we-100. Lokhu nakanjani kuzokwenza uphawu lomkhiqizo wakho emakethe nasekubuyiseni amathani wenzuzo.
Amakhamera agqokwa nomzimba:
Ukusebenza kunoma yiliphi ibhizinisi lomhlinzeki wesevisi, ukusekelwa kwamakhasimende nokunakekelwa kuyisinyathelo esiyisisekelo kunazo zonke saleso bhizinisi. Ukusungula ukuzethemba phakathi kwamakhasimende nomenzeli wakho wokusekela owabelwe kungumsebenzi wakho (uma wenza ibhizinisi lomhlinzeki wesevisi). Kunezindlela eziningi zokuqinisekisa ukuthi amakhasimende akho empeleni athola lokho akudingayo njengompendulo kumakhasimende, kepha bekungeke yini kube ngcono ukuthi ukubone lokhu ngamehlo akho ukuthi wonke amakhasimende athola ukwesekwa nokunakekelwa okufanele. Ukuze ufune lokho, amakhamera agqokwa ngumzimba abalulekile.
Kunezinzuzo ezimbili zokusebenzisa amakhamu agqokwa ngumzimba uma ungumhlinzeki kagesi. Eyodwa, njengoba kuxoxwe ngayo phambilini, kuzoqinisekisa ikhwalithi yokusekelwa kwakho kwamakhasimende. A Ucwaningo Kwenziwa i-2012, imiphumela yayo ikhombisa ukuthi i-33% yabantu baseMelika bathi bazocubungula izinkampani eziguqukayo ngemuva kwesibonelo esisodwa senkonzo engeyona. Okunye ukushicilela wathi izinkampani zaseMelika zilahlekelwa ngaphezulu kwama- $ 62 billion ngonyaka ngenxa yokusebenza kwamakhasimende okungekuhle. Into yesibili ukuqinisekisa ukuphepha kwempilo yomuntu wesilisa (emazweni lapho kusekelwa khona inethiwekhi evulekile).
Ngokufana nabanikezeli bakagesi, igesi elinikezela ngebhizinisi lingasebenzisa nezinsimbi ezigqokwa ngumzimba ukuze bazenzele.
Abantu abahamba phansi ukuqiniseka ukuthi ukuhamba kahle kwezinsizakalo zokukhucululwa kwendle kuvame ukubanjwa zisesimweni esibucayi. I-Suffocation iyimbangela eyinhloko yokufa ezimweni ezinjalo. Uma laba basebenzi behlomele izinsimbi zomzimba lokho kungaphathwa kahle kungavinjelwa. Umuntu ngakolunye uhlangothi ozobheka lesi simo angathumela amaqembu asindisa ngesikhathi ukusindisa izimpilo eziningi.
Ucwaningo olwenziwe yiSafai Karmachari Andolan (SKA), ngaphandle kokuthi luyinto enobuntu yakudala, seluthathe izimpilo ze1327 eminyakeni embalwa edlule. Ngokwemininingwane evela kwinhlolokhono, iTamil Nadu iqophe ukubulawa kwabantu okwenzeka cishe nge250 kule minyaka engamashumi amabili edlule, okuthe phakathi kwabo kwaba nengxenye eyodwa kwezintathu noma i-84 kwaba phakathi naseC Chennai.
Amakhamera agqokwa ngomzimba nokuhweba okuphelele:
I-Wholesale luhlobo lokushintshana lapho okuthengwa ngalo kutholwa bese kubekwa kude ngamanani amakhulu bese kuthengiswa, ngamabhande esamba esabelwe, kubambisene nabo, amaklayenti anekhono noma imibuthano, kodwa hhayi kumakhasimende agqamile. Lezi zinhlobo zokuthengiselana kufanele zigadiwe ukuze kugcinwe indawo enempilo yomsebenzi kanye nokuzethemba phakathi kwabahwebi.
Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba kulo mkhakha futhi kunikeza isisekelo sekusasa elisha lapho konke okwenziwe kanye nemihlangano kuqoshwa.
Amakhamera agqokwa ngomzimba nokuhweba okuthengiswayo:
Ibhizinisi lokuthengisa ngokuthengisa lithengisa ukuthengisa kwezimpahla kumakhasimende angaqapheli angabasebenzisi bemikhiqizo yansuku zonke. Amakhamera agqokwa ngomzimba ayadingeka futhi kulo mkhakha ukuze kuqinisekiswe insizakalo esezingeni eliphezulu kanye nokuhamba kahle kwebhizinisi.
Ake sicabange ukuthi uphethe isitolo sokudla, uzodinga ukwazi ukuthi abasebenzi bakho basebenza ngokuzinikela okugcwele futhi isimo sabo maqondana namakhasimende sisezingeni eliphakeme. Singasho ukuthi lobu buchwepheshe obunqenqemeni buyisihluthulelo sokwenza ibhizinisi lakho liphumelele.
Amakhamera agqokwa ngomzimba kanye nezezimali, umshuwalense kanye nezezakhiwo:
Amakhamera agqokwa ngomzimba nawo abalekelela kakhulu emabhizinisini afana nezezimali, umshuwalense kanye namabhizinisi wezezindawo. Wonke la mabhizinisi adinga irekhodi lazo zonke izivumelwano ezibhaliwe nezenziwe ngomlomo. Lezi zinkampani zinikeza usizo olukhulu ukugcina umlando wamarekhodi anjalo.
Uma ungumenzeli wenkampani yomshuwalense, kufanele kube nekhamera ebekwe phezu kwakho ezokunika ibhizinisi lakho unqenqema. Amakhasimende azokwazi ukuthi le nkampani igcina ukulandelela konke okuzoholela ekwenzeni isithombe esihle sangempela senkampani engqondweni yomthengi.
Ukuba nebhizinisi lendawo ethengiswayo eliqhubekayo, amakhamera agqokwa ngomzimba azogcina ukulandela ukusebenza kwakho okungakusiza uma noma yiliphi iqembu lezohwebo lizama ukuyeka ukwenza isivumelwano.
Amakhamera agqokwa ngomzimba nokuqinisa umthetho:
Kuyabonakala ukuthi abomdabu bebelokhu bephathwa ngokuqhubekayo kwizikhombisi ezisemthethweni ngesikhathi sokuhlangana. Izakhamuzi zihlala ziguqula indlela eziziphatha ngayo lapho zibona ukuthi ziyarekhodwa. Isiza izidingo zomthetho ukuze okuhlangenwe nakho kwezinga eliphansi kuxazululwe ngempumelelo esikhundleni sokukhuphukela kokucabangayo lapho ukusetshenziswa kwamandla kuphakama kubalulekile.
Yize kunjalo, siyazi ukuthi amanye amakhamera ayashintsha indlela yokuziphatha. Amakhamera we-TV avaliwe womphakathi abonakala eholela ekwehlelweni okulinganiselwe kobugebengu, ikakhulukazi emagalaji okupaka. Amakhamera wethrafikhi anciphisa kakhulu ukuhamba ngesivinini nezingozi ezibulalayo.
Amakhamera agqokwa ngomzimba angaletha ukucacisa okungcono nesibopho futhi, ngale ndlela, asiza futhi athuthukise ukusebenza komthetho. Kuyabonakala ukuthi kumanethiwekhi amaningi kukhona ukungathembani phakathi kwabantu bendawo nezinhlangano ezigunyaza umthetho. Lokhu kungathembani kuyaphazamiseka uma kunemibuzo maqondana nokusetshenziswa kwamandla ayingozi noma angabulawa. Ifilimu yevidiyo ebanjwe phakathi kwalezi zinhlangano ezisemthethweni zenethiwekhi inganikeza imibhalo engcono yokusiza ekuqinisekiseni umqondo wezikhathi namarekhodi okuqina achazwa yiziphathimandla nezakhamuzi zenethiwekhi
Ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngumzimba kunikeza namathuba angabakhona wokuqhubekisela phambili umsebenzi wamaphoyisa ngokuqeqeshwa. Abaqeqeshi bezomthetho nabaphathi bangasebenzisa i-footage ukunikeza isipiliyoni esiseduze nokuhlangana komhlaba wangempela. Bangahlaziya imisebenzi yamaphoyisa kanye nokuziphatha okuthwethwe yizinsimbi ezigqokwa ngumzimba. Kuyasiza ukuthuthukisa ubungcweti phakathi kwezikhulu nokuqashwa kabusha. Bazokwazi ukuthi yini izinto ezingenzeka zingahambi kahle emphakathini nokuthi ungazigwema kanjani.
Njengoba zonke lezi zici ezingenhla ziqhakambisa imiphumela emihle yokusebenzisa amakhamera agqoke umzimba ezinsizeni zobuphoyisa nezokugcinwa komthetho, amakhamera uqobo lwawo akufanele athathwe 'njengenhlamvu yomlingo'. Amakhamera agqokwe emzimbeni angelinye lamathuluzi amaningi angasetshenziswa ngohlaka lwesimanje lwamaphoyisa ukuze kuthuthukiswe ukusebenza nokuphepha.
Ukuphetha zonke izici okuxoxwe ngazo ngenhla, singasho ukuthi amakhamera agqokwa ngomzimba ayinto ebalulekile kumabhizinisi wanamuhla. Ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba ezimbonini ezahlukahlukene kubalulekile ekukhuleni nasekuthuthukisweni kwezwe lakho. Kulezi zinsuku, ukusetshenziswa okuyinhloko kwamakhamera agqokwa ngomzimba kuyabonakala eminyangweni yamaphoyisa nakwezempi kepha le ndatshana isuse yonke imiqondo yokuthi iyindima ebalulekile kulo lonke ibhizinisi.
Kubalulekile futhi ukugcina irekhodi isici sobumfihlo ngenkathi ugcizelela ukusetshenziswa kwayo kuyo yonke imboni. Kuyacaca ukuthi ukuvela kobuchwepheshe obusha nezinkundla zokuxhumana sekushintshe indlela abantu ababheka ngayo ubumfihlo babo, kepha ukuqoshwa okwenziwe ngamakhamera agqokwa ngomzimba kungahle kuvume ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokuqashelwa kobuso.
Ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngumzimba kunikeza izikhulu ithuba lokuqopha izimo ezibucayi, kodwa futhi nokuqopha ngaphakathi kwamakhaya abantu lapho bebopha noma benza ucwaningo. Mayelana nalokhu, ezinye izinhlangano eziqinisa umthetho zithathe lesi sikhundla sokuthi izikhulu zinelungelo lokuqopha ngaphakathi ezindlini zabanye inqobo nje uma zinelungelo elingokomthetho lokuba lapho. Lokhu, ngenxa yalokho, kuphazamisa ubumfihlo babantu abaningi okuyinto engalungile emaphoyiseni. Akukho ukuyekethisa okufanele kwenziwe ngasese.
Ukusetshenziswa Kwamakhamera Worn Worn by Izimboni igcine ukuguqulwa: I-December 5th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-4135 Ukubuka kwe-3 Namuhla